သတင်း - Arenti သည် iF DESIGN AWARD 2021 ကို ရရှိခဲ့သည်။
Hoofddorp၊ ဧပြီလ 13 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် - Arenti သည် ယခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာကျော် ဒီဇိုင်းဆုဖြစ်သည့် iF DESIGN AWARD ၏ ဆုရရှိခဲ့ပါသည်။အနိုင်ရရှိထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် Arenti Optics Smart Home Security Series သည် ထုတ်ကုန်၏စည်းကမ်းပိုင်း၊ လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် လူခေါ်ခေါင်းလောင်းအမျိုးအစားတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လွတ်လပ်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်း Hannover အခြေစိုက် iF International Forum Design GmbH သည် iF DESIGN AWARD ကို စီစဉ်ကျင်းပပါသည်။
Arenti Optics Smart Home Security Series သည် ၎င်း၏ အလူမီနီယမ်ဘောင်ဒီဇိုင်း၊ 2K Ultra HD Resolution နှင့် Artificial Intelligence Powered Features တို့ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အမှီအခိုကင်းသော ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဝင် 98 ဦးပါ ဂျူရီအဖွဲ့အား အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့သည်- အရည်အသွေးတံဆိပ်ကိုရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း 52 နိုင်ငံမှ 10,000 တင်သွင်းခဲ့သည်။
Arenti Optics Smart Home Security Series ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို "အနိုင်ရသူများ" ကဏ္ဍတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။iF ကမ္ဘာ့ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်.
Arenti သည် Arenti Technology မှ DIY Smart Home Security System အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများအား ပိုမိုလွယ်ကူလုံခြုံပြီး ပိုမိုစမတ်ကျသောအိမ်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များအား နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများ၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Arenti စမတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှု၊ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများတွင် အစွမ်းကုန်ပေးဆောင်သည်။ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 100+ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင် R&D အဖွဲ့မှ 100% တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးအုပ်စု3ခုမှ အဓိကအားဖြင့် Braun၊ Panasonic နှင့် ဝန်ထမ်း 500 ကျော်တို့နှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တာမှ ထုတ်လုပ်သည့် အီတလီဒီဇိုင်းအဖွဲ့မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ နယ်သာလန်နှင့် PRC ။
အမ်စတာဒမ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တည်ထောင်ထားသော ဥရောပရုံးခန်းများနှင့်အတူ၊ Arenti သည် 2019 ခုနှစ်တွင် ရောင်းချခဲ့သည့် စမတ်ကင်မရာ အလုံးရေ3သန်းဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထိပ်တန်းစမတ်ကင်မရာ 10 ခုထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 2020 ခုနှစ်တွင် 4.5 သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ Arenti ၏ ကျယ်ပြန့်သောအစုစု စမတ်အိမ်ကင်မရာများတွင် အဝင်အဆင့်ရှိ အိမ်တွင်းကင်မရာများနှင့် အဆင့်မြင့်ဘက်ထရီသုံးကင်မရာများ၊ ဗီဒီယိုတံခါးခေါင်းလောင်းများနှင့် မီးထွန်းကင်မရာများ ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည် Alexa၊ Google Assistant နှင့် အခြားပလပ်ဖောင်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
iF DESIGN AWARD အကြောင်း
67 နှစ်တာကာလအတွင်း iF DESIGN AWARD ကို ထူးထူးခြားခြား ဒီဇိုင်းအတွက် အရည်အသွေး၏ အကဲဖြတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။iF တံဆိပ်သည် ထူးချွန်သော ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျော်ကြားပြီး iF DESIGN AWARD သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးကြီးဆုံး ဒီဇိုင်းဆုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။တင်သွင်းမှုများကို အောက်ပါ ဘာသာရပ်များတွင် ချီးမြှင့်သည်- ထုတ်ကုန်၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဒီဇိုင်း၊ ဗိသုကာနှင့် အတွင်းခန်းဗိသုကာအပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အယူအဆ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ (UX) နှင့် User Interface (UI)။ချီးမြှင့်ခံရသော ဝင်ခွင့်များအားလုံးကို အဆိုပါနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။iF ကမ္ဘာ့ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်၌iF ဒီဇိုင်းအက်ပ်.
Wifi စောင့်ကြည့်ကင်မရာ Wifi Camera ပြင်ပ Wifi ကင်မရာစနစ် အိမ်ကင်မရာစနစ် ကြိုးမဲ့ကင်မရာ ဘက်ထရီအားသုံး ကြိုးမဲ့ ပြင်ပလုံခြုံရေးကင်မရာ သုံးသပ်ချက်များ